Ma Jiraa Waqti Ka Wanaagsan Oo Lagu Bilaabo Shabakad Bulsho Oo Cusub? | Martech Zone
Arbacada, Janaayo 17, 2018 Axad, Janaayo 21, 2018 Douglas Karr
Waqti badan ayaan ku luminayaa baraha bulshada. Inta udhaxeysa algorithms cilladaysan iyo khilaaf ixtiraam la'aan, waqtiga yar ee aan ku qaato warbaahinta bulshada, waan faraxsanahay.
Dadka qaar oo aan la wadaagay qanacsanaanteyda ayaa ii sheegay inay khaladka aniga igu dhacay. Waxay dhaheen waa wadahadalkeygii furanaa ee siyaasada sanadihii lasoo dhaafay ee albaabka ufuray. Runtii waxaan aaminsanahay hufnaan - xitaa hufnaan siyaasadeed - markaa labadoodaba waan ku faanayay aaminsanaantayda waana difaacay sannadihii la soo dhaafay. Si fiican umay shaqeyn. Marka, sanadkii la soo dhaafay waxaan sameeyay dadaal wada jir ah si aan uga fogaado in aan internetka kaga hadlo siyaasadda. Waxyaabaha xiisaha leh ayaa ah in kuwa i caaya ay wali u dhawaaqayaan sidii ay waligoodba ahaayeen. Waxaan u maleynayaa inay si daacadnimo ah uun iiga doonayeen inaan aamusnaado.
Shaacin buuxda: Anigu waxaan ahay qariib siyaasadeed. Waan jeclahay siyaasada maxaa yeelay waan jeclahay suuq geynta. Dareenkayguna waa wax la yaab leh. Shakhsiyan, waxaan iskula xisaabtamayaa si aan uga caawiyo adduunka inuu noqdo mid wanaagsan. Gobol ahaan, aad ayaan u xushmadsanahay waana u bogaadinayaa canshuuraha si aan u caawiyo dadka kale ee baahan. Qaran ahaan, in kastoo, waxaan aaminsanahay inaan waqti dheer ka soo daahnay isbeddel.
Dhibbane ma ihi, laakiin natiijada madax-bannaanideyda ayaa ii fureysa in qof walba la igu soo weeraro. Saaxiibbaday oo u janjeera dhanka bidix qaran ahaan waxay aaminsan yihiin inaan ahay gadaal, shaqooyinka lowska garabka midig. Saaxiibbaday oo si sax ah ugu tiirsan maxalliga waxay la yaaban yihiin sababta ka dambeysa ee aan ula laalamayo Dimoqraadiyiin badan. Shakhsiyanna, waan quudhsadaa in laygu calaamadiyo dhinac kasta. Uma maleynayo inay lama huraan tahay in wax kasta oo ku saabsan qof ama aragti siyaasadeed la naco hadaad ku khilaafto hal qof ama dhinac fikirkaas ah. Si kale haddii loo dhigo, waan qaddarin karaa qaar ka mid ah isbeddelada siyaasadeed ee maanta dhacaya aniga oo aan ixtiraamin siyaasiyiinta dejiyey.
Ku laabo shabakadaha bulshada.
Waxaan aaminsanahay balanqaadka cajiibka ah ee baraha bulshada inuu ahaa inaan daacad noqono, is wargalino, is fahamno, oo aan isku soo dhowaanno. Wow, miyaan khaldamay. Aqoonsi la'aanta baraha bulshada oo ay weheliso awooda shakhsiyadeed ee aad ugu dagaallami karto dadka laga yaabo inaad si kale u daryeesho ayaa ah mid cabsi leh
Shabakadaha bulshada ayaa jabay, oo awoodaha ayaa sii xumeynaya (sidaan qabo).
On Twitter, xanta ayaa leh haddii lagu xannibo @williamlegate, waxaa laguu aqoonsaday inaad tahay lowska garabka midig waana hadhweyn - taasoo la micno ah in wararkaaga cusboonaysiinta aan lagu soo bandhigin durdurka dadweynaha. Ma aqaano inay run tahay, laakiin waxaan ogaaday in koritaankaygu halkii fadhiyay. Qeybta ugu xun ee tan waa inaan runtii ku raaxeysto Twitter. Waxaan la kulmaa dad cusub, waxaan ogaadaa sheekooyin cajaa'ib leh, waxaanan jecelahay inaan halkan kula wadaago waxyaabaha ku jira.
Waxaan weydiiyay @jack, laakiin run ahaan mood furan - Weli ma aanan maqlin jawaab.
Hey @jack, Waxaan ahay taageere weyn @Twitter oo arkay inaan noqon karo #shadowbanned. Waxaan jeclaan lahaa inaad ka aqriso qoraalkeyga oo aad ii sheegto waxa ku saabsan, siyaasadeyda, xumaanta ama xushmad darrada. Runtii waan ka xumahay inaan arko tan. Haddii aad mamnuuceyso dadka macquul ah ee aniga oo kale ah - taasi waa wax laga naxo.
- Douglas Karr (@nacaybtire) January 15, 2018
On Facebook, Waxay qirayaan inay hadda ka shaandheeyaan quudinta wada sheekaysiga shaqsiyadeed. Tani, sanado badan ka dib riixitaanka shirkadaha si ay u dhisaan bulshooyinka, si hufan uga dhexgalaan la macaamilka macaamiisha iyo ganacsiyada, iyo shirkadaha maalgashiga ku sameeya malaayiinta dhisida isku dhafka, otomaatiga, iyo warbixinta. Facebook ayaa kaliya jiiday fiilada halkii.
Fikradayda runta ah, ka tanaasulka qarsoodiga ah ee u janjeedhada siyaasadeed ayaa ka khatar badan kuwa laftooda u janjeera. Wax dhibaato ah kuma qabo basaasinta dowladda ee xisaabaadka bulshada halkaasoo koontooyinku ay ku dhiirrigeliyeen dhaqdhaqaaq sharci darro ah, laakiin waxaan dhibaato weyn ku qabaa shirkadaha inay si aamusnaan ah doodaha u hagaajiyaan si ay u jecel yihiin. Facebook xitaa wuxuu ka tagayaa ilaha wararka ilaa cod guud. Si kale haddii loo dhigo, xumbadu way sii adkaan doontaa. Haddii dadka laga tirada badan yahay diidaan, macno malahan - waxaa lagu quudi doonaa fariinta inta badan markasta.
Waa Inay Jirtaa Shabakad Bulsheed Ka Wanaagsan
Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in Facebook iyo Twitter ay yihiin waxa aan ku dhegan nahay. Shabakado badan ayaa isku dayay inay tartamaan dhammaantoodna way ku guuldareysteen. Hagaag, wax isku mid ah ayaan ka nidhi Nokia iyo Blackberry markay tahay taleefannada gacanta. Shaki iigama jiro in shabakad cusub ay awood u yeelan doonto ayna xukumi doonto suuqa marka ay sheegato isla xorriyadda u saamaxday guusha Twitter iyo Facebook.
Arrintu ma ahan fikrad xun, ee waa dhaqan xumo. Mar dambe lagamana filayo inaan si xushmad leh u diiddanno kuwa aan ku diiddan nahay. Waxa maanta laga sugayaa waa ceeb, jees jees, caga juglayn, iyo aamusinta qofka wax caaya. Idaacadahayagu waxay ka turjumayaan dhaqankan. Xitaa siyaasiyiinteena ayaa qaatay dhaqankan.
Waxaan ahay taageere weyn oo leh fikirka kaladuwan. Waan kugu raaci karaa adiga oo wali waan ixtiraamayaa waxaad aaminsantahay. Nasiib darrose, annaga oo laba dhinac ah, waxaan u muuqannaa inaan midba midka kale madaxa dul saarno halkii aan ka keeni lahayn xalka bartamaha oo ixtiraamaya dhammaan.
Tani Waxay Leedahay Wax Walba Oo Ku Saabsan Suuqgeynta?
Markii la ogaado in kuwa wax galaya (wararka, raadinta, iyo baraha bulshada) ay ku milmayaan siyaasada, waxay saameyn ku yeelaneysaa ganacsi kasta. Aniga ayay saameyn igu leedahay. Shaki iigama jiro in waxa aan aaminsanahay ay saameyn ku yeesheen ganacsigeyga. Mar dambe uma shaqeynayo hoggaamiyeyaasha warshadayda oo aan runtii eegay oo aan wax ka bartay maxaa yeelay waxay akhriyaan ra'yigayga ku aaddan arrimaha siyaasadda oo ay dhabarka u jeediyeen.
Haatan waxaan daawaneynaa sida dagaalyahanada cadaaladda bulshada dhinac kasta oo ka mid ah muuqaalka ay ula xisaabtamayaan magacyada meesha ay dhigayaan xayeysiisyadooda, iyo waxa shaqaalahooda ka dhahaan internetka. Waxay dhiirigelinayaan qaadacaadda… taas oo aan kaliya saameyn ku yeelanayn hoggaamiyeyaasha ganacsiyada, laakiin shaqaale kasta oo ka tirsan gudaha iyo bulshada ku hareeraysan. Hal tweet ayaa hadda qeexi kara qiimaha saamiyada, dhaawici kara ganacsiga, ama burburiya xirfad. Marnaba ma jeclaan lahaa kuwa ka soo horjeeda fikradayda in dhaqaale ahaan loogu ciqaabo tooda. Tani waa wax aad u badan. Tani ma shaqeyneyso.
Natiijada waxaas oo dhami waxay tahay in ganacsatadu ay dib uga guranayaan baraha bulshada, oo aysan qabsanayn. Ganacsiyadu waxay noqonayaan kuwo aan daah furneyn, ee aan noqon kuwo hufan. Hoggaamiyeyaasha ganacsigu waxay qarinayaan taageeradooda fikradaha siyaasadeed, mana dhiirrigelinayaan.
Waxaan u baahanahay shabakad bulsheed ka wanaagsan.
Waxaan ubaahanahay nidaam abaal marin kara edeb, madax furasho, iyo ixtiraam. Waxaan u baahanahay nidaam dhiirrigeliya aragtiyada iska soo horjeeda halkii aan ka horumarin lahayn qolalka hadalka ee xanaaqa. Waxaan u baahanahay inaan isbarno oo midba midka kale u bandhigno aragtiyaha kale. Waxaan u baahannahay inaan u dulqaadno fikradaha kale.
Ma jiro waqti ka wanaagsan hadda oo lagu horumariyo barxadda isku xirnaanta bulshada sidan oo kale.
Ku badin Suuqgeyntaada Soo-galista liistada Hubinta Jiilka Hore